Mafere Resume na Job Ngosi | Martech Zone
Mafere Resume na Job ngosi
Tuzdee, Machị 17, 2009 Sọnde, Febụwarị 5, 2017 Douglas Karr
Na Sọnde, m na-arụ ọrụ na atụmatụ mmalite ọzọ ma nwee mkparịta ụka na ndị mmekọ m niile banyere nghọta na Intanet. Ọ dịghị iche. Dị ka ndị isi azụmaahịa, ọ dị ha mkpa ịpụ n'ìgwè ehi ahụ, ọ dị mkpa ka ha mara ọnụnọ ha, ọ dị mkpa ka ịnwe foto ebe ahụ ndị mmadụ nwere ike ịhụ. Ha kwesiri ịpụ n'èzí ma ọ bụrụ na ha chọrọ ka anyị nweta ego wee chọta akụ.
Ọ bụrụ na ị naghị enwe ọrụ, i kwesịrị ime otu ihe ahụ.
Companylọ ọrụ m na-arụrụ ọrụ na-ego ọrụ. Gaghị ahụ ha n'ụlọ ọrụ na nnukwu ụlọ ọrụ ndị na-ejuputa ọnọdụ ndị nwụrụ anwụ n'ọhịa cubicle ha. Won't gaghị ahụ ha nkwanye site malitegharịa, ma. Gaghị ahụta ha ka ha na-azụ oghere na saịtị ntanetị achọrọ maka enyemaka n'ịntanetị, ma.
Anyị na-achọta ndị ga-enwerịrị mmeri site na ndị ọrụ mmekọrịta anyị (gụnyere ụlọ ọrụ ntinye ego) ma anyị nyocha ha na Google iji hụ otú ha ga-adaba n'ime ụlọ ọrụ mgbasa ozi. Ọ bụ nnukwu ụlọ ọrụ. Ọ bụ ụlọ ọrụ na-eto eto. Ọ bụ ụlọ ọrụ na-akpali akpali.
Kpọmkwem na ndị ọkachamara n'ahịa, kpoo uwe ahụ ma kee ya ma nweta aha gị ebe ahụ. Pịa anụ ahụ na ihe omume mpaghara, jigide blọọgụ, wepụta onwe gị iji kụziere ụfọdụ klas maka ndị ọkachamara mpaghara, ma kpọtụrụ netwọkụ gị ma mee ụfọdụ ndụmọdụ na-adịghị mkpa maka ha. Anọla n’elu ihe ndina na-eche ka ekwentị gbanye.
Ọ bụrụ na enweghị m ọrụ, enweghị m obi eziokwu na achọrọ m ịrụ ọrụ maka ụlọ ọrụ nke ka na-eso ìgwè ehi ma jiri nwayọ na-achọ otu ndị a na-aga ime otu saịtị ntanetị nke ha jiri afọ iri gara aga.
Nke a bụ oge gị, ohere gị, ịpụ n'ihu mkpọ ma meere onwe gị aha.
Tags: ziri eziọrụ ngosiọrụLinkedInoru ahiamalitegharịa
Mar 17, 2009 na 9: 49 AM
Otutu ndi oru ahia na acho oru na oru ma obu oru.
Mar 17, 2009 na 9: 51 AM
Ana m diggin 'kalenda wpng. Nwere ike tinye ya na saịtị m.
Mar 17, 2009 na 4: 44 PM
Ọ bụ ahịa ndị were mmadụ n’ọrụ. Nọmalị, ịnweghị ike ịkpọta 10% kachasị elu, n'ihi na ha enweworị ọrụ ma a ga-arafu ha. Mana taa, enwere ndị na-arụsi ọrụ ike na ndị na-enweghị ọrụ. Ndị ụlọ ọrụ (dị ka Compendium onye were Doug) nwere ọgụgụ isi ịtụ anya inwe ike ịkpọ ndị kacha mma kachasị mma na-enweghị igwu ala.
Itinye akwụkwọ maka ọrụ site n'ọnụ ụzọ dị n'ihu abụghị nnukwu echiche, ma ọ bụrụ na ịchọrọ nnukwu ọrụ, ọ nwere ike bụrụ igbu oge na akụnụba a. Ugbu a iji gosipụta mmasi na ike gị n'ịchọ ọrụ. Ndị were gị n'ọrụ kwesịrị ịrụ ọrụ ga-amata mbọ gị ma kwụọ gị ezigbo ụgwọ.
Companylọ ọrụ Seo
Mar 18, 2009 na 8: 45 AM
Job ngosi bụ naanị ihe eji eme ihe, Ihe niile na-eme site na ntinye.
Mar 18, 2009 na 9: 27 AM
Nke a bụ nnukwu ederede, ọtụtụ mmadụ na-asọba ọrụ ahịa na ọ nweghị ihe a rụzuru. Ọ bụrụ na ndị mmadụ anọdụ ala ma mata ebe ha ga-esi goro ha ego, ọ ga-aka mma.
Mar 18, 2009 na 9: 44 AM
Anọ m na-akwalite mkpa ọ dị isonye na mgbasa ozi mmekọrịta na iwulite njikọ ịkpọtụrụ gị na LinkedIn na ndị ọzọ. Ọ dị ka ọ bụghị otu ebe ndị mmadụ na-aga ịchọpụta banyere onye na-azọ ọchịchị mana ebe 1.
Chegodi ma oburu na ijikoro na ahia gi, gha ekwu okwu banyere ulo oru ulo oru ma soro ha na twitter. Olee otú obi ga-adị gị ụtọ n’ajụjụ ọnụ ahụ? Eleghi anya, karia ihe, olee ka onye were ya n’ọrụ ga-enwe obi iru ala?
Ekwenyere m Doug, ndị mmadụ malitere ọnwa isii gara aga na mgbasa ozi mmekọrịta dị ọtụtụ kilomita n'ihu ndị na-enweghị.
Mar 19, 2009 na 11: 55 AM
Ọ dị mma ịhụ na abụghị m naanị onye na-enweta ọtụtụ ndị na-achọ ọrụ na mgbasa ozi mmekọrịta na enweghị ọbụna profaịlụ! Ọ dị oke njọ na ụfọdụ ndị anaghị eche banyere iji amamihe họrọ onye were ha n’ọrụ - kama ha chọrọ inweta ọrụ - ọrụ ọ bụla.